Onshore Production-Onshore Production-Zhejiang Huaxia Flow Technology Co., Ltd (Titan waalka waa sumadeena)
Waqtiga: 2020-10-09 Hits: 41
Fiilooyinka Titan API 6D iyo API 6A ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa suuqa sare ee saliida iyo gaaska. Ceelasha gaaska saliida leh waxaa lagu aqoonsan yahay qiimeyn cadaadis sare oo gaarsiisan ilaa 20,000psi iyo heerarka H2S iyo CO2 oo ay weheliyaan heerkulka sare iyo walxaha ciidka ka dib baahida loo qabo alaab tayo sare leh oo adag.
Waxqabadka sii kordhaya ee sahaminta gaaska shaleenta oo leh jabka iyo farsamooyinka wax soo saarka saliidda oo la xoojiyay iyadoo si ballaaran loo adeegsanayo kiimikooyin iyo duritaanka biyaha. Qalabkeena iyo qalabka xakamaynta socodka waxay u baahan yihiin inay taageeraan xaalufka sii kordhaya iyo nabaad-guurka inta lagu jiro baaritaanka.
Waad ku mahadsan tahay habka naqshadeynta casriga ah ee loo yaqaan 'Titan valve', xulashada qalabka saxda ah, xaaladda xirmooyinka farshaxanka iyo tiknoolajiyadda buufinta ee adag, Titan waalka ayaa bixiya xalal cusub oo loogu talagalay adeegga dalbashada.
Farsamooyinka Titan ee lagu rakibay xaaladaha deegaanka ee daran sida lamadegaanka, cimilada arctic iyo xaaladaha aadka u daran.